महामारी Archives - जुनेली न्युज
गोकर्नेश्वोर नगरपालिकाको नि:शुल्का एम्बुलेन्स सेवा सुचारु निरन्तर
जुनेली न्युज, काठमाडौँ | गोकर्नेश्वोर नगरपालिकाले कोरोना भाइरस साथै गरिब दुखीलाइ ध्यानमा राखेर निशुल्क एम्बुलेन्स संचालनमा लिएको छ | कोरोना भाइरसको महामारी संगै संचालनमा ल्याएको एम्बुलेन्स अहिले आएर नगरपालिकाबाटै संचालन हुनेगरी नगरपालिका प्रमुख सन्तोष चालिसेको पहलमा निशुल्का एम्बुलेन्स संचालनमा ल्याएको हो | यस अघि पनि कोरोना बिरामीलाई सेवा दिन २ ओटा एम्बुलेन्स संचालनमा ल्याएको थियो […]
उपत्यकामा १६१५ सहित २३६४ जना कोरोना संक्रमित थपिए, १७ जनाको मृत्यु, ३०३८ डिस्चार्ज
कार्तिक १३, काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा २३६४ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा १६१५ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । काठमाडौंमा १३३८, ललितपुरमा १८० र भक्तपुरमा ९७ जना संक्रमित थपिएका छन् । यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १ लाख ६४ हजार ७१८ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा ९७६९ जनाको पीसीआर परीक्षण […]
कात्तिक ०६ काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमणबाट थप २० जनाको मृत्यु भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयहरुका अनुसार काठमाडौं ८, भक्तपुरका ३, रुपन्देही २ तथा ललितपुर, धादिङ, नुवाकोट चितवन, पर्सा, सुनसरी र कञ्चनपुरका एकएक जनाको मृत्यु भएको छ । काठमाडौंका ८१ वर्षीय पुरुषको सोमबार मृत्यु भएको छ । श्वासप्रश्वासमा समस्या भएर १८ असोजमा […]
कात्तिक ५, काठमाण्डाै । पछिल्लाे २४ घण्टामा काठमाण्डाै उपत्यकामा ३ हजार १ सय ७ जनामा काेराेना भाइरसकाे सङ्क्रमण पुष्टि भएकाे छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बुधबार काठमाण्डाैमा २ हजार ३ सय ९१, भक्तपुरमा १ सय ७३ र ललितपुरमा ५ सय ४३ जनामा सङ्क्रमण देखिएकाे हाे । त्यस्तै बुधबार देशैभर २० हजार १ सय […]
कात्तिक ०५ काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा ५७४३ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले पछिल्लो २४ घण्टामा ५७४३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिए । यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १ लाख ४४ हजार ८७२ जना पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा २० हजार ११८ […]
उपत्यकामा १७०२ सहित ३०९३ जनामा कोरोना संक्रमण, ८ जनाको मृत्यु
कात्तिक ४ पछिल्लो २४ घण्टामा ३ हजार ९३ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले पछिल्लो २४ घण्टामा ३०९३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिए । यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १ लाख ३९ हजार १२९ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा १३ हजार ८ सय […]
सुनापतिमा एक इन्जिनियर र खाँडादेवीमा एक होटल संचालक सहित ३ जनामा कोरोना पुष्टि
कात्तिक ०४, रामेछाप । रामेछाप जिल्लामा थप तीन जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । सोमबार राति प्राप्त प्रादेशिक जनस्वास्थ्य ल्याब धुलिखेल बाट प्राप्त रिपोर्टर्स अनुसार गएको ३० गते खाँडादेवि गाउँपालिकाबाट ५२ जना स्वाब पठाइएकोमा २ जनाको पोजेटिभ देखिएको हो । यो पनि पढ्नुहोस् विश्वभर कोरोना सङ्क्रमणबाट निको हुनेको संख्या ३ करोड नाघ्यो रामेछापमा : आज […]
कात्तिक ४, काठमाण्डौ । विश्वभर कोरोना सङ्क्रमण निको हुनेको संख्या ३ करोड नाघेको छ । अहिलेसम्म ४ करोड ६ लाखमा कोरोना पुष्टि भएकोमा ३ करोड ३ लाख २९ हजार ७ सय जना निको भएका वल्ड्रोमिटरले जनाएको छ । वल्ड्रोमिटरका अनुसार गएको २४ घण्टामा मात्रै २ लाख २१ हजार ३ सय ६५ जना निको भएका हुन् […]
भौतिक पूर्वधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त कुमार नेम्वाङलाई कोरोना संक्रमण
कात्तिक ०३, काठमाडौं । भौतिक पूर्वधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त कुमार नेम्वाङलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । सोमबार गरिएको परीक्षणमा उनलाई संक्रमण देखिएको उनले टुविट्मा उल्लेख गरेका छन् । उनले आफ्नो सम्पर्कमा आएकाहरुलाई सचेत हुन आग्रह गरेका छन् । आजको PCR परीक्षण रिपोर्टमाम मा पनि कोरोना- पोजिटिभदेखियो। यस बीच मसंग सम्पर्कमा आउनु भएका सबै महानुभवहरुले […]
कार्तिक ३ काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा थप ३ हजार ७९० जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमण पुष्टि भएको छ । देशभरका प्रयोगशालामा १५ हजार ७१४ नमुना परीक्षण गर्दा उनीहरुमा संक्रमण पुष्टि भएको हो । थपिएका संक्रमितमध्ये २३८८ जना काठमाडौं उपत्यकाका छन्, जसमध्ये काठमाडौंका २००८ जना, ललितपुरका २८१ र भक्तपुरका ९९ जना छन् ।
रामेछापमा : आज २ जना संक्रमितहरु निकोभएर घर फर्किए, कूल संक्रमित २८६
कात्तिक ०३ रामेछाप । रामेछापको लिखु तामाकोशी गाउँपालिकामा रहेका २ कोरोना संक्रमितहरु डिस्चार्ज भएका छन् । सोमबार उनीहरु डिस्चार्ज भएका हुन् । जिल्ला अस्पताल रामेछापले जारी गर्ने नियमित प्रेस विज्ञप्ति मार्फत पालिकाका संक्रमित डिस्चार्ज भएको उल्लेख गरेको छ । उनीहरु दुबै जना पुरुष हुन् । त्यस्तै जिल्लामा आजसम्म कोरोना पोजेटिभ हुनेको संख्या १४२ जना पुगेको […]
कात्तिक २, काठमाण्डाै। विश्वभर कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितको सङ्ख्या चार करोड नाघेको छ । विश्वका दुई सय १५ देशमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट अहिलेसम्म चार करोड २३ हजारभन्दा धेरै सङ्क्रमित भएको वर्ल्डाेमिटरले जनाएको छ । यस्तै सङ्क्रमितमध्ये ११ लाख १५ हजार छ सयभन्दा धेरैको ज्यान गएको छ भने दुई करोड ९९ लाख ३४ हजारभन्दा धेरै उपचारपछि निको […]